Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Momba ny Tseky » Ny birao mpitantana ny seranam-piaramanidina Prague dia mifidy filoha vaovao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Tseky • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny komisiona an'ny minisitera dia nisafidy an'Andriamatoa Pos ho mpifaninana sahaza indrindra amin'ny tolo-tanana iray nitaky izany toerana izany.
Jiri Pos dia voafidy ho filohan'ny Birao mpitantana ny seranam-piaramanidina Prague.
Nankatoavin'ny Komity Mpanendry ny mpiasa ao amin'ny Repoblika Czech ny fanendrena azy.
Ny fanendrena azy dia natolotry ny Ministeran'ny Vola ao amin'ny Repoblika Czech.
Androany, Jiří Pos dia voafidy ho filohan'ny Birao mpitantana ny seranam-piaramanidina Prague nataon'ny mpikambana namany ao amin'ny Birao. Noho izany dia mandray ny andraikitry ny filohan'ny filankevi-pitantanana mpiasan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena lehibe indrindra any amin'ny Repoblika Czech izy, nanomboka ny 30 Aogositra 2021.
Ny fanendrena azy ho mpitantana ny orinasa dia nankatoavin'ny Komity Mpanolotsaina ao amin'ny Governemanta Czech Czech tamin'ny Aogositra 2021, taorian'ny fanoloran-kevitry ny Minisiteran'ny Vola ao amin'ny Repoblika Czech, tompon'andraikitra tokana ao amin'ilay orinasa. Ny komisiona an'ny minisitera dia nisafidy an'Andriamatoa Pos ho mpifaninana sahaza indrindra amin'ny tolo-tanana iray nitaky izany toerana izany.
Jiří Kraus dia manohy manao ny andraikitry ny filoha lefitry ny filankevi-pitantanana.
Ny mpikambana efatra ankehitriny Seranam-piaramanidina Prague Nivory ny filankevi-pitantanana androany tamin'ny fivoriana miavaka nataon'ny andrim-panjakana mifidy ny filohany. Nankatoavina i Jiří Pos. “Tsy mampanantena zavatra tsy ho vita aho ao anatin'ny telo andro sy fahagagana indray mandeha. Na izany aza, resy lahatra aho fa afaka mampiasa ny mety ho an'ny seranam-piaramanidina Prague izahay hanamorana ny fiverenany tombony ary hanatsara ny fivoarany bebe kokoa amin'ny fahafaham-pon'ny mpandeha, ny mpiara-miasa aminay, ary ny tompony, nefa voajanahary, raha jerena ny fiantraikan'ny tontolo iainana tanàna manodidina sy distrikan'ny tanànan'i Prague. ”
Jiří Pos niverina tany Seranam-piaramanidina Prague rehefa afaka fito taona. Nanatevin-daharana ilay orinasa izy tamin'ny 2006. Tamin'ny 2011 ka hatramin'ny 2014, izy dia Prague Airport Chairman of the Board of Directors and CEO. Nanomboka ny taona 2014 ka hatramin'ny 2015 dia mpikambana tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny vondrona Aeroholding Czech izy. Taorian'ny nandaozany ny vondrona dia nitady ny asany manokana izy, indrindra teo amin'ny sehatry ny fiaramanidina sivily sy fizahan-tany. Nanomboka ny taona 2019 ka hatramin'ny 2021 dia sekretera tao amin'ny Seranam-piaramanidina Karlovy Vary izy. Nanomboka ny asany tamin'ny fiaramanidina tao amin'ny Czech Airlines izy, izay nijanonany nandritra ny roapolo taona. Nanomboka ny asany tamin'ny fiaramanidina izy tamin'ny 1986, niasa tao amin'ny Czech Airlines, izay nijanonany nandritra ny roapolo taona. Niasa voalohany tao amin'ny biraon'ny kaompaniam-pitaterana Czech tamin'ny 1994 ka hatramin'ny 2001. Avy eo dia izy no filoha lefitry ny orinasa miadidy ny Ground Operations nanomboka ny taona 2003 ka hatramin'ny 2006. Nahazo diplaoma tamin'ny University Teknika Czech any Prague, ny Faculty of Mechanical Engineering, izy. miaraka amin'ny spécialité eo amin'ny sehatry ny toekarena famokarana fiaramanidina.
Birao mpitantana ny seranam-piaramanidina Prague hatramin'ny 30 Aogositra 2021:
Jiří Pos - Filohan'ny filankevi-pitantanana
Jiří Kraus - filoha lefitry ny filankevi-pitantanana
Jakub Puchalský - Mpikambana amin'ny filankevi-pitantanana
Jiří Černík - Mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanana